Apple Fitness + Oo Daah Furay Tababar Haweenka Uurka Leh Iyo Kuwa Waaweyn | Wararka IPhone
Apple Fitness + wuxuu la qabsadaa adoo u furaya jimicsi haweenka uurka leh iyo dadka waayeelka ah
Angel Gonzalez | 16/04/2021 20:13 | Noticias, Alaabada Apple
El Apple Watch Waxay joojisay inay noqoto aalad yar oo ka mid ah soo uruurinta Apple si loogu meeleeyo a qalab hagaajiya tayada nolosha dadka. Intaa waxaa dheer, iyada oo la bilaabayo jimicsiga casriga ah ee Big Apple Apple Fitness +, Isticmaalayaasha ku nool wadamada ay horeyba u heli karaan waxay kaqeybqaadan karaan fadhiyada tababarka ee loogu talagalay isboortiga kala duwan, xoojinta iyo laxanka laxiriira heerka jirkeena jir ahaaneed. Dhowr saacadood ka hor ayay ku dhawaaqeen jimicsiga cusub ee haweenka uurka leh iyo dadka da'da ah. Dhaqdhaqaaq wanaagsan oo ay ka heleen kuwii ka yimid Cupertino si ay isugu dayaan inay daboolaan dhammaan baahiyaha isticmaaleyaasha suurtagalka ah ee jimicsiga jimicsiga oo sidoo kale ku daraya tababaro cusub oo loogu talagalay isboorti kala duwan iyo tababarayaal shaqsiyeed cusub cida la tababarayo.
Tababbarka dadka waaweyn iyo haweenka uurka leh, kan cusub ee ka socda Apple Fitness +
Apple Fitness +, waa adeegii ugu horreeyay ee jimicsi ee laga dhisay Apple Watch, wuxuu soo bandhigayaa xitaa siyaabo badan oo loo sameeyo soo dhaweyn jir ahaaneed oo loo dhan yahay qof walba oo leh jimicsiyo cusub oo si gaar ah loogu talagalay uurka iyo waayeelka, iyo sidoo kale jimicsiyo kala duwan oo heer sare ah oo yoga ah (HIIT) iyo jimicsi xoog leh bilowga ah. Jimicsiyadan waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan dadka isticmaala inay yeeshaan kalsooni jimicsi, iyadoon loo eegin heerka jirkooda, haddii ay bilaabayaan, isku dayayaan wax cusub, ama ku soo laabanayaan jimicsiga markii ugu horreysay muddo dheer.
ka jimicsiga haweenka uurka leh Apple Fitness + waxaa hogaamin doona hooyada mustaqbalka Betina Gozo iyo hooyooyinka Emily Fayette iyo Anja García. Manzana hubiyaa in tababaradaan cusub ee 10-ka daqiiqadood loogu talagalay in si fudud oo dhaqso leh loogu sameeyo seddex biloodle kasta oo uur ah iyo gaar ahaan xaalad kasta oo jireed oo haweeneyda uurka leh. Intaas waxaa sii dheer, inta ka harsan jimicsiga ka dhex jira barxadda waa la yareyn karaa xoog si loo awoodo in loogu lamaaneeyo jimicsiyadan cusub. Tababbarka qaar ayaa loogu talagalay dadka u baahan daryeel bulsho iyo caafimaad oo gaar ah.
Apple Fitness +, oo ah adeeg jimicsi oo ku wajahan Apple Watch
Iyaguna waa lagu daray jimicsi cusub oo loogu talagalay dadka da'da ah Waxaa hogaaminaya Molly Fox, Gregg Cook, Dustin Brown, Bakari Williams iyo John González. Mid waliba wuxuu ku takhasusay nooc isboorti: xoog, yoga, HIIT, qoob-ka-ciyaarka, iwm. Waxay xaqiijinayaan taas shaqooyinkan cusub 8 waxaa lagu sameeyaa qashin yar ama miisaanka jirkaaga. Marka wax badan looma baahna, marka laga reebo Apple Watch si ay ula jaanqaado barxadda, way iska cadahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Fitness + wuxuu la qabsadaa adoo u furaya jimicsi haweenka uurka leh iyo dadka waayeelka ah
Fiidiyow xaday shabakadda ayaa muujinaya waxa uu noqon karo qalinka Apple 3
Codsiga Camo, si loogu beddelo iPhone kaamirada websaydhka, wuxuu ku darayaa shaqooyin xirfad leh